Tiorkia: Iharan’ny Onjam-panafihana Nefa Mitohy Ihany Ny Fitokonan’ny Mpitandro Filaminana Ao Afovoany Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Septambra 2015 5:24 GMT
Sary Demotix. fihaonana am-pilaminana tao Bakırköy, Istanbul tamin'ny 9 Aogositra 2015, nitarika mpanohana an'arivony mpomba ny Kiorda izay sahiran-tsaina amin'ny fanafihan'i Tiorkia ny toerana misy ny PKK manerana ny sisintany. Sary nalain'i Avni Kantan. ID: 8285673.
Tamin'ny 10 Aogositra, olona miisa sivy farafahakeliny no niharan'ny fanafihana nifanesisesy tao Istanbul, tanàna lehibe indrindra ao Tiorkia, sy tao Sirnak – faritany atsimo atsinanana. Koa satria efa hatreny an-dohalika ny olan'ilay firenena any AfovoanyAtsinanana, dia maneloelo eny foana ny tahotr'izy ireo ny amin'ny mbola hisian'ny fanafihana indray.
Niharan'ny fanafihana madinidinika nifanesisesy i Torkia, izay nahafatesana mpitandro filaminana miisa 20 farafahakeliny sy olona ampolony avy amin'ny foko Kiorda, hatramin'ny nanombohany ny hetsika ara-tafika tohanan'ny fiaramanidina Amerikana baikoana avy lavitra nanafihana an'i Iràka sy Siria tamin'ny volana lasa teo.
Ny tena nokendren'ireo fanafihana ara-tafik'i Torkia dia ireo mpitolon'ny ISIS miziriziry amin'ny heviny sy – mitombo tsikelikely – ireo tafika mankatò ny Antokon'ny Mpiasa Kiorda (PKK) izay fahavalon'i Ankara hatrizay .
Ilay baomba nirefodrefotra tamin'ny 20 Jolay tao Suruc, tanàna any atsinanan'i Torkia, izay nahafatesana olona 33, no nitarika io firenena io ho tafiditra an-tsehatra tamin'ilay ady sy fifandirana izay nijanony tsy nombana na iza na iza tany aloha.
Nandratra mpitandro filaminana miisa telo sy olon-tsotra miisa fito ilay fanapoahana baomba teo amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana iray tao Istanbul tamin'ny maraindrainan'ny 10 Aogositra. Namotika ny ampahany amin'ilay trano avo be ny afo naterak'ilay baomba. Nilaza ny biraon'ny governora ao Istanbul fa namoy ny ainy nandritra ny fipoahan'ilay baomba ilay olona noahiahiana ho nanapoaka izany. Nanao fanambarana taoriana kelin'io ho tompon'antoka tamin'ilay fanafihana ireo mpitolona mpitolona avy ao amin'ny vondrona PKK.
Mampiseho ny zava-nisy taorian'ny fanafihana ireo sary navoaka sy naely tao amin'ny Twitter .
💥Fanapoahana baomba teo anoloan'ny tobin'ny mpitandro filaminana #Sultanbeyli #Istanbul #Turkey. olona 6 no naratra, 1 ahiana mafy ny aminy 📷
manamboninahitry ny polisy niisa 5 farafahakeliny & olon-tsotra 2 no naratra nandritry ny fanapoahana baomba tao amin'ny toby iray misy ny mpitandro filaminana tao an-tanànan'i #Istanbul tao #Tiorkia
Ny Alatsinainy taorian'io, nisy roalahy nitondra basy — vehivavy izy ireo araka ny tatitra– nitifitra ireo mpitandro filaminana izay nanao fanadihadiana teo amin'ny toerana nitrangan'ilay fanapoahana baomba vao haingana kely teo. Taorian'io tifitra basy io dia namoy ny ainy ny manamboninahitra iray tao amin'ny polisy, sy olona roa hafa ihany koa farafahakeliny.
Nandritra izany fotoana izany, nisy baomba nipoaka teo amin'ny sisin-dàlan'i Sirnak izay nahafatesàna mpitandro filaminana miisa efatra ary nisy miaramila iray ihany koa namoy ny ainy nandritra ny fanafihana iray hafa raha notifirin'ny lehilahy iray angidimbin'ny tafika.
Tamin'io andro io ihany, nisy olona roa nanafika ihany koa ny biraon'ny kaonsily Amerikana. Nilaza ho tompon'antoka tamin'ilay fanafihana ny avy ao amin'ny DHKP-C. Faritran-dry zareo ho “fahavalo lehiben'ny vahoaka ao Afovoany Atsinanana sy manerana izao tontolo izao” i Etazonia.
Mampiseho ny zava-nisy taorian'ny fanafihana ireo sary maromaro nobitsihan'i @metesohtaoglu.
Sarin'ny fanafihana ny biraon'ny kaonsilin'i #US tao #Istanbul #Turkey 📷@DHA
Araka ireo bitsika miely aty anaty aterineto dia fantatra fa iray tamin'ireo noahiahiana ho nahavanon-doza i Hatice Aşık, vehivavy mpitolona avy amin'ny ankolafy farany havia ao amin'ny vondrona DHKP-C. Raha ny tatitra voaray dia voatifitra ary nosamborina izy.
💥Hatice Asik,iray tamin'ireo vehivavy roa tao amin'ny vondrona DHKP-C noahiahiana tamin'ny fanafihana ny biraon'ny kaonsilin'i #Etazonia tao #Istanbul, voatifitra& voasambotra 📷
33 andro lasa monja izay i Asik no navoaka ny fonja. Nigadra nandritra ny telo taona izy ary navoaka raha toa ka niandry ny valin'ny didim-pitsarana mikasika ny fiahiahiana azy ho nandray anjara tamin'ny fanapoahana baomba teo amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana tao Yenibosna, Istanbul, izy tamin'ny taona 2012.
Raha araka nolazain'ny vavolombelona iray nanatri-maso dia nitsoaka ny toerana nitrangan'ny loza ilay vehivavy faharoa.
Nilaza ny Masoivoho Amerikana ao Tiorkia fa tsy nisy mpiasa na mpanjifa naratra vokatr'ilay ‘tranganà tsy fandriampahalemana’ tao amin'ny Kaonsilin'i Etazonia.
Tsy nandratràna mpiasa na mpanjifan'ny kaonsily ny tranganà tsy fandriampahalemana io maraina io tao Istanbul
Nakatona mihitsy ny biraon'ny kaonsily ny tontolo andro ka ny 11 Aogositra, ampitson'ny andro nitrangan'ny fanafihana, no niverina nisokatra indray.
Tao anaty fanambarana ofisialy iray, naneho “ny fiarahany miory amin'ireo niharan-doza” tamin'ny fanafihana, “ary koa ny Governemanta sy ny vahoakan'i Tiorkia” ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana, Ban Ki-Moon. Manantena izy, araka ny nolazainy, fa “ho voasambotra tsy ho ela ary ho entina eo anoloan'ny fitsarana” ireo olon-dratsy nahavanon-doza
Herinandro maromaro taorian'ny nisian'ireo fanafihana tamin'ny alàlan'ny fiaramanidina baikoina avy lavitra natao tamin'ny ISIS any Syria, dia nanao ny fanafihany voalohany tamin'ny alàlan'ny fiaramanidina misy mpanamory niainga avy taminà toby ao Tiorkia i Etazonia hamelezany ny tafiky ny ISIS tamin'ny 12 Aogositra, roa andro monja taorian'ny fanafihana nitranga tao Tiorkia.